R & D Team - Southern Sparkle Wearable Teknolojia Co., Ltd.
Ny R & D Center dia ahitana Fashion famolavolana, mekanika, elektronika, rindrambaiko, fanaovana fitiliana sy ny fitantanana tetikasa.
1. Ny lamaody ekipa endrika manokana amin'ny akanjo dia fomba famolavolana sy ny santionany kevitra araka ny mpanjifa 'fangatahana na ny tena fampandrosoana.
2.The milina ekipa manokana ao amin'ny 3D famoronana sy ny famolavolana bobongolo.
3. Ny ekipa elektronika no nomerika manokana ao amin'ny faritra, faritra voajanahary LF, HF (RF) fizaran-tany sy ny hery nanaovana elektronika faritra.
4. Ny rindrambaiko no ekipa manokana ao amin'ny MCU / DSP nandinika lalina mikirao praogramanao, PC fampiharana dia tapaho fampiharana sy IOS / Android nanaovana fampiharana.
5. ekipa dia ny fizahan-toetra manokana ao amin'ny antsipirihany fitiliana mba hiantohana ny famolavolana tonga lafatra.
6. Ny PM dia manokana ny ekipa ao amin'ny zavatra hafa, fitaovana, vola / vola sy ny fotoana fitantanana mba hiantohana ny tetikasa rehetra mety ho vita ara-potoana sy mahomby.
Toeram-piasana sy ny Fitaovana;
Ny R & D foibe manana 520 metatra toradroa birao sy ny laboratoara. Ny miasa tany dia mahafinaritra sy fitaovana amin'ny eto ambany ireto:
Tsy mifantoka amin'ny fananana ara-tsaina fanangonan-karena. Mandra-2 vanim-potoana ny 2018, dia nahazo 18 famoronana Patents, 28 jiro modely Patents sy 4 tarehy Patents, vita 2 siansa tetikasa fikarohana ny siansa sy ny teknolojia sy ny fizarana ny Dongguan madinika / fitaovana orinasa fizarana ny Dongguan. Amin'ny lafiny iray hafa, ny ananantsika zavatra maro hafa Patents famoronana vaovao sy ny ilàna Patents modely eo am-piandrasana.
Noho ny vokatra R & D asa dia sarotra ny asa, ary ny olona nanao raharaham-R & D dia tsy maintsy manokana ny sasany fanjakana, ny R & D fitantanana dia mampiasa lasitra manokana fanomezana, milaza tsirairay tetikasa staff miaraka amin'ny marindrano fandaharana, ary mamaritra ny mitsangana talenta amin'ny sasany foto-kevitra amin'ny mitsangana fandaharana . Ary tamin'ny tetikasa horizontal fitantanana, dia efa nomena ny olona izay zatra ny vokatra rafitra sy ny fampisehoana, ary koa ny soa amin'ny harena fanomezana sy ny fandrindrana. Za-draharaha izy ireo teknolojia ankamaroany manam-pahaizana na manam-pahaizana mpitantana ambony. Mitsangana eo amin'ny fitantanana tetikasa, mampiasa ny iray izay zatra vokatra fahalalana, henjana siansa sy ny injeniera ny fahaiza-misaina sy ny dingana famokarana. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsara injeniera.
© Copyright - 2010-2020 : All Rights Reserved. Products Guide - Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - DIEM Mobile
mafana Vest, 12v mafana Car Seza lafika, liana Insoles Rechargeable , pataloha mafana, mafana Mipalitao, Fanafanana pad ,